version 0.9.1 – အဆက်မပြတ်တိုးတက်စေူခင်း
ဇန္နဝါရီလ 23, 2013 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု4comments
အကြောင်းအစောပိုင်း posted သင့်တယ် 0.9.1 တချို့ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုများနှင့်အတူအစားကောင်းတဲ့ဗားရှင်းအရာဖြစ်၏. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီအလွန်အမင်းကောင်းတဲ့ Animation ကိုမြော်လင့်, အပေါ်ကိုဖန်ဆင်း Fiverr တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်အားဖြင့်, ဒီနေရာမှာအဖွဲ့မှအသွေးအားဖြင့် related ခံရဖို့ဖြစ်ပျက်🙂
ငါတို့သည်လည်းanice ဖန်တီးပါပြီ Widget လေးထားချင်ရင်ပြခန်း စာမျက်နှာ, ကိုယ့် သွား. ကြည့်!
အရမ်းတတ်တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အ Admin interface ကိုအတွင်းရှိအချို့သောအကူအညီ Added (keys တွေ – မလုပ်ပါနှင့်, သင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် keys တွေမလိုအပ်ပါဘူး)
jQueryUI ဗားရှင်း overriden ခံရဖို့ Allow, များစွာသောပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင (ဟောင်းနွမ်း themes များ, jQuery နဲ့ jQueryUI ၏ unsorted ဗားရှင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမျိုး)
အချို့မကောင်းတဲ့ plugins ကိုတစ်ဦးမသင့်လျော်သောလမ်းအတွက် .css ထည့်သွင်းသည့်အခါတစ်ဦးကပြင်ဆင်ချက် (ဒီဘာသာစကားကို selecred ခဲ့ပြီးသောကြည့်ဖို့ကိုပိတ်ထားတဲ့စွမ်းရည်ကို)
ထို transposh_echo function ကို Added – မြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ဆောက်ရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်
ဝစ်ဂျက်များအဘို့အပြင်ဆင်ခြင်း, shortcodes နှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူထည့်သွင်း, ဟောင်းနွမ်း dropbox ပြင်ဆင်ခြင်း, ဖယ်ရှားအိုင်ဒီ
admin ရဲ့ရန်ထိတွေ့လာကြတယ်ထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်း, ထိတွေ့ devices များကိုခွင့်ပြုခြင်းအပေါ်ဘာသာစကားရွေးချယ်ခြင်း
သင့်အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? download ယခုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း!
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2013 တွင် 10:05 ညနေ
ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လန်းဆန်းစဉ်ကဤ update ကို update လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ဤပြဿနာတယ်:
“fatal error: အမည်မသိ: လိုင်း0င်ထဲက Unk​​nown အတွက် output ကိုကြားခံ display ကိုချပြီးအတွက် output ကိုကြားခံအသုံးမနိုင်သလား”
ဒါကြောင့်ကိုယ့် plugin ကိုပိတ်လိုက်ပြီ, နှင့် website ယခုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်,
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2013 တွင် 3:14 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2013 တွင် 9:46 နံနက်
သင်က Downgrade version ကိုပေးနိုင်ပါသည်, update ကိုရှေ့တော်၌အသင်နောက်ဆုံး version ကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2013 တွင် 12:24 ညနေ
အစဉ်အဆက်ပြန်လွတ်လာတိုင်း version ကနေ download လုပ်စေခြင်းငှါ:
ဆဲသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်.